Kushanya kweCaribbean kunoramba kuine tariro yekudzokororwa kunyangwe nyowani Omicron snag
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Caribbean » Kushanya kweCaribbean kunoramba kuine tariro yekudzokororwa kunyangwe nyowani Omicron snag
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Mumwedzi gumi nemisere yapfuura, nzvimbo dzeCaribbean, pasina kunze, dzakaratidza kusimba kwavo mukugadzira mazano ekugadzirisa, kubatanidza maitiro ekufambisa anogara achivandudzwa, uye kubatirana nevadyidzani vematunhu nevekunze munzvimbo dzehutano uye kutsigira kwehupfumi nekusimudzira.
The Caribbean Tourism Sangano (CTO) inoramba yakanaka pamusoro pekuenderera mberi kweindasitiri yekushanya kunyangwe takatarisana nekusagadzikana kunokonzerwa nedenda ririkuenderera mberi.
Mumwedzi gumi nemisere yapfuura, Caribbean kwekuenda, pasina kusarudzika, vakaratidza kusimba kwavo mukugadzira nzira dzekupora, kubatanidza zvinogara zvichigadziridzwa zviteshi zvekufambisa, uye kubatirana nevadyidzani vedunhu nevekunze munzvimbo dzehutano nerutsigiro rwehupfumi nebudiriro. Kudzoreredza muchiitiko chega chega, kwakaitika uku uchivimbisa hutano nekuchengetedzeka kwevagari nevashanyi zvakafanana.
Gore ra2021 rakatipa chiratidzo chekuti kune chiedza kumagumo kweiyo yave yakareba tunnel yakatanga muna Kurume 2020. Pakazosvika pakati pa2021, takaona shanduko mumabasa ekushanya, ne Caribbean inodarika avhareji yepasi rose yekukura kwekusvika kwekugara uye mupiro wekushanya kune gross domestic product (GDP). Muchikamu chechitatu chegore ra2021, pakanga paine vashanyi 5.4 miriyoni vanosvika mudunhu, kanenge katatu ivo vanosvika panguva imwe chete muna 2020, asi zvakadaro 23.3 muzana pazasi 2019 mazinga. Mishumo yekutanga inoratidza kuti kufambira mberi uku kwakaenderera mberi kusvika pakupera kwekota yekupedzisira. Nekuda kweizvozvo, zvinofungidzirwa kuti vashanyi vanosvika muna 2021 vachapfuura mazinga e2020 ne60 kusvika 70 muzana.
Sezvatinotanga 2022, tichinetsekana zvakare nemhedzisiro yeimwe mutsauko mutsva uyo uri kukanganisawo kufamba kwenyika dzese, tinokurudzirwa nezviitiko zvekupora uye zvidzidzo zvakadzidzwa muna 2021.
Izvi zviitiko uye zvidzidzo zvakatidzidzisa kuti kufamba uye kugamuchira vaenzi zvinogona kugarisana nedenda rinokanganisa kwese kwatinoenda nemisika. Nepo mhedzisiro kusvika parizvino isati yaratidza kudzoka kumazinga a2019, mhedzisiro yakasarudzika yakanyorwa muzhizha kusvika gore-yekupedzisira nguva ya2021 inoratidza kuti kudzoreredzwa kana zvishoma nezvishoma kudzoreredzwa kungangoita uye kunogoneka mukupera kwa2022.